Ducaadda maanta doorkooda | Heeshi
Dadka ay wax u sheegayaan waa in ay u dhuundaloolaan xaaladaha ay ku suganyihiin. Waana in ay qaabeeyaan [oo kaga daydaan Nebiga (NNKH)] sida ugu habboon, uguna fudud, ee ay farriintooda dadkan ugu gudbin karaan. Waa in ay dulqaad badan u lahaadaan dadkan, una jajabnaadaan weydiimahooda. Waa in ay dhaqanka wax-tebinta kaga daydaan Rasuulka (NNKH). Waayo tani waxay u keenaysaa in ay ka fogaadaan qallafsanaanta. Sidoo kale, waa in ay wax weyn ka bartaan ducaadda waaweyn iyo sida ay daacinnimada waayaheeda u soo mareen.
 Af Ingiriiska ayaan ka gudbadhigay sheekadan. Waxay na ku soo baxday af-Carabi. Sidaas awgeed, waxaa jiraysa in ay gudbadhistani ka yara geddisnaato ta Carabiga laga samayn lahaa. Dhugo in wixii khaladaad ah ee ay gudbadhigistani yeelato uu qoraheedu dhabarka u ridanayo, oo aan qofkii laga soo gudbadhigay hadalladiisa wax eedeyn ah loo soo jeedin karin, iyada oo gudbadhistan laga duulayo.
← “Wanka macasha ii qabo”
Booliquutanimada aragtiyaha: Ma dhayalsi baa, mise waa dhagris? →